Sida Q1 2017, Twitter wuxuu ku saabsan yahay 330 triệu isticmaalayaal Firfircoon, illaa 10 triệu oo ka rụt rè Q4 2016 (Ilo). Inkasta oo koritaanka uu yahay mid gaabis ah, barkadda Dadka isticmaala ayaa jira. Si loo helo dhagaystayaasha dhagaystayaasha ah, waxaan u baahannahay inaan dhisno raadiye joogta ah oo raacsan.
Giống như shabakadaha kale ee bulshada, waxay u baahan tahay ballanqaadka waqtiga iyo tamarta si ay ugu guuleystaan ​​Twitter.
Kumanaan kun oo muslimiin ah ma dhacaan habeenkaas. Haddii aad ka fekereyso sida aad ku bilaabi lahayd Twitter, waxaan wadaagay Talooyin khabiiro ku saabsan mowduuceena:
11 Người làm vườn
13 Mít Ray
14 Trò chơi Ruben
Chris Carroll / Raul Tiru / Gail Gardner / Evan Carmichael / Susan Dolan / Daniel Scocco / Găng Ray /
Mawduucyada sii kordhaya ee taageerayaasha Twitter ayaa dhab ahaantii aan cusubeyn. Waxaan soo gaadhay khabiiro ka soo jeeda asal kala duwan sida blogger, marketer, wakiilka guryaha ijaarada, qoraaga, af-hayeenka, ganacsadaha, iwm. Wixii talo ah.
Halkaan waxaa ka muuqda waxyaabihii u muuqday trong ay ka yimaadeen badankooda.
Dhiso cha dhagaystayaal ah. Tayada tirade badan.
Ku dar xisaabtarka Twitter oo ay wehliyaan ololayaal cải xoăn oo suuq-geyn ah.
Ku mahadnaq dhammaan asxaabteena waqtiga ay ku qaataan inay kaga jawaabaan mawduucayaga ku saabsan sida loo helo taageerayaal badan oo Twitter ah. Waan hubaa trong Talooyinkan ay bixiyaan fikradaha qaar dib-u-habeyn istiraatiijiyadeena suuq-geynta iyo warbaahinta bulshada.
Haddii aan ku siin lahaa faahfaahin # 30 si aad u bilowdo sii kordhaya taageerayaasha Twitter – U sheeg "Chào" chaka kor ku xusan. Ku raaxayso!
Haddii aad leedahay sáp ka duwan inaad ku darto, nala soo socodsii Twitter hoặc Facebook.
"Jawaab celinta RTs, ka hadalka, kuwa raacsan ee cusub, faallooyinka ku saabsan tabaha Dadka kale, ka qeybgalka xafladaha Twitter / sheekaysiga ayaa ah qaabab aasaasi ah oo lagu," ayuu raaciyay.
Trang web: Inta badan
Wald waxa uu ka hadlayay qalabka Twitter-ka iyo hababka sida badan loo isticmaalo. Halkan, waxay soo jeedinaysaa qalabka 3 trong ay gacan ka geysato kordhinta taageerayaasha Twitter,
Commun.It – Qalabka sidan oo kale ah ee aad u heshay Dadka isticmaala Twitter-ka (Tweeps). Waa dhaqanka Twitter-ka inuu raaco dhabarka, gaar ahaan haddii aad ủ rũ. Sidaa darteed, haddii aad iyaga raacdo, oo ay blog ku saabsan waxyaabaha la midka ah, waxay kugula socon doonaan adiga.
Wald, viết blog iyo Tababaraha warbaahinta bulshada, ayaa sidoo kale xusay qaar ka mid ah habab dheeraad ah. Marka Dadku dib ugu soo qortaan maqaalkayga taageerayaashooda, waan raacaa. Sida iska cad, iyagu waa isla fikir ama ma doonayaan inay raacitaankoodu akhriyo maqaalkayga. Markay dib ugu soo qoraan qoraalkeyga, waan raacaa. Maaddaama ay yihiin cha isku fikir ah, waxay u wanaagsan yihiin dib-u-soocelintooda. Giáo dục
Cấm Waxaa jira dabin ay ở badan oo suuqleey iyo milkiileyaasha ganacsigu ku dhex dhacaan Đá iyagoo ka walaacsan cabirrada beenta ah. Adam Connell wuxuu xusayaa ở kuwa raacsan Twitter-ka inay yihiin kuwa kale ee qiyamka nacasnimada ah ee naga leexin kara waxa muhiimka ah.
Connell ayaa ku xusan trong uu boosto ku soo dir Blog,
Sáp kale oo uu sii wiiqayaa hababka 2 si faahfaahsan:
1. Ka dib email-ku-qor maga CTA
Tallaabooyin gaar ah oo ku jira habka aan u shaqeynayo, waxaan ku dari doonaa wicitaanada Taleefanka ku dhiirigeliya macaamiisheyga in ay i soo raacaan Twitter (iyo sida bogga).
CTA waxay của tôi u muuqataa inay jilicsanaan jilicsan tahay markii aan ku jiray saxeexa iimaylka – waxaad samayn kartaa wax ka sii toos badan haddii aad doorbido.
Chắc chắn, hab sahlan ayaa noqon lahaa trong lagu daro widget-ga caan ah ee blog-ka ah – laga yaabee dhinaca kale.
Laakiin xaqiiqadu waxay tahay inaan helay natiijooyin aad u wanaagsan oo ka imanaya suuq-geynta emailka marka aan ka sameeyo warbaahinta bulshada. Sidaa thức dậy, Mudnaan ayaan u hayaa.
Trong kasta oo kobaca raacdadeyda Twitter-ka uu gaabis u yahay sidan, kuwa raacsan ee aan ku kasbado waxay noqon doonaan kuwo ku hawl gala. Hadduu Twitterku dhinto, wali waxaan haystaa liiskayga e-may ..
Nidaam weyn oo lagu ansixiyo Dadka isticmaala Twitter kuwaas oo ay u badan tahay inay ku raacaan adiga ayaa ah inaad raacdo, isku xirto oo aad la xiriirto kuwa la wadaagaya.
Si aad u ogaato cidda la wadaageysa qoraalladaada blog, waxaad ku qori kartaa URL-yada boostaada sanduuqa raadinta Twitter. Laakiin, waxay kaliya la shaqeysaa qoraalo dhowaan dhaweyd.
Markii aan qoro URL-ga boostada, waxaan helaa liis la kala sooci karo oo ku saabsan kuwa la wadaagay boostada. Ka dib si toos ah ayaan uga daba socon karaa barnaamijka. Aniguna waan ku dari karaa ‘liistada’ người gây ảnh hưởng ‘.
Taasi micnaheedu waa inaad sameyso wax ka badan jeclaan / dib ugu laabo boggagooda – waxaad u baahan tahay inaad lahadasho. Hadana si ka sii fiican, ku caawi iyaga sáp (taasi waa hab dhakhso leh oo lagu xasuusto).
Connell wuxuu raaciyay inaad sidoo kale ka gudbi karto kobcinta akoonadaada kale ee bulshada, ku dhiirigeliso kuwa raacsan inay ku soo biiraan liistada emaylkaaga oo aad u abu. "Haa, waa mid gaabis ah oo aan si fudud wax u miisaamayn laakiin chạy ahaantii waa lacagbixin."
"Ugu horreyntii, waxaad u baahan tahay inaad ku saxdo hồ sơ. Isticmaal sawirro tayo sare leh ee aad ufiiriso iyo dabool. Qoraan macluumaad iyo mawduuca bio. Bixi wixii kalsooni ah ee aad qabtid.
"Labaad, waxaad u baahan tahay inaad la socoto jadwalkaaga boostada. Waxaan jeclaan lahaa in aan istcimaalo istaraatijiyada 4-1-1 halkaasoo aan wadaagnoa Bộ đệm waa hubkeyga xulashada ee otomaatiga.
"Seddex, isdhexgeli Dadka. Heerarka ka-qaybgalka ayaa aad ugu hooseeya warbaahinta bulshada. Haddii aad wakhti qaadatid si aad u akhridid ​​boostada qof, u sheeg trên Twitter. Haddii uu qof su’aal weydiiyo, qaado daqiiqadaas si aad uga jawaabto oo u bixiso qiime. Waxaa laga yaabaa in aan la qiyaasi karin, laakiin waxa ay iga caawisay in aan raaco dheereeye sidan oo kale oo aan fikrado u lahayn tweet tweet buuxa tweets. "
Trang web: Istaraatiijiyooyin farsamo
Patrick Commbe wuxuu wadaagayaa qaab gaar ah oo lagu kobcin karo kuwa raacsan twitter-ka. Jawaabtayda waxaan ku soo koobi doonaa astaamo: ^
Bộ lạc "^" waxay la giữa tahay erayga "chèn". Tusaale ahaan, waxaan isku darsaday wadahadal lala yeeshay dhowr saamileyaal, waxaanay raaceen 5-10 saacadaha 2, iyo 30 waxay booqdaan goobtayda saacadda 1.
Tusaale yar, waan ogahay, laakiin taasi waa sida ay u shaqeyso. Taasi waa calaamaddayda, waa sida ugu fiican ee dariiqa caddaanka ah ee caddaynta ah ee loo helo taageerayaasha Twitter. Anigu waxaan shakhsiyan u leeyahay taageerayaal Twitter ah 6000, oo dhan oo aan ku helo asal ahaan. Haddii aad rabto in aad si dhab ah u dhisto koontadaada heer sare ah, waxaad u baahan tahay inaad ku rido shaqada. Waa shaqo waqti buuxa ah haddii aad runtii rabto in aad saxdaa.
Beddelka, Commbe, blogger iyo qoraha, ayaa sheegay trong ay jiraan shirkado isticmaala bot si ay u helaan taageerayaasha. "Ama waxaad raaci kartaa wadada garaaca, oo isticmaal bot. Ma doonayo inaan là sheego, waxa ay u shaqeysaa trong ay raacaan Dadka raacsan. Shirkado badan ayaa sameeya.
Waxaad ciyaari kartaa ciyaarta ‘lasoco oo lasoco’ ama waxyaabo otomatik ah shay aad kuhesho halkaad ka helayso soo bandhigid badan, iyo fursado badan oo aad ku heli karto kuwa raacsan. Nasiib wacan! Ra Ayiy raaciyay.
Si aad u dhisto boggaan Twitter, Allan Pollett wuxuu diiradda saaraa sidii loo heli lahaa Dadka raadinaya nikaddiisa isla markaana bilaicut inay la shaqeeyaan. Wuxuu nala wadaagaa:
Pollett wuxuu sidoo kale na xusuusinayaa inaan taxaddar muujino markii aan raadineyno raacdeyaal, "Xusuusnow ha raacin sáp kabadan Dadka 200 maalin kasta maxaa yeelay raacitaanka intaas ka badan ayaa kaa mamnuuci kara."
Wuxuu intaas ku daray haddii ay lambaro uun tahay inaad daba socoto oo aysan jirin wax kale oo uu a vitaminan yahay sida ugu wanaagsan ee lagu helo taageerayaal badan oo Twitter ah ay.
Ka dib isticmaalayaasha kale ee Twitter waa bilaash, fudud in la sameeyo iyo habka ugu fudud ee loo dhisi karo dhakhso soo socda. Tusaale ahaan, waxaan ku shaqeeyaa blog waqti socdaal ah si aan u raaco blogger cải xoăn. Haddii aan tago oo raaco farabadan oo ka mid ah bloggerka socdaalka ee Twitter hadda, ka dibna lambar muhiim ah ayaa i soo raaci doona maalmo yar gudahood.
Sproston wuxuu cadeeyay trong qofkasta uusan dib kuu raaci doonin oo ay k lửarantahay nooca dhaqaalahaaga. Hoàng tử Lambarka dhabta ah ee gadaal ka soo bixi doona wuxuu ku xirnaan doonaa warshadaha su Sueaasha, laakiin waxaan u adeegsaday qaabkan si aan uga caawiyo shirkadaha aan ka Si lagaaga caawiyo inaad la socoto cidda gadaal ka soo daba socota iyo cidda aan daba gelin, waxaad isticmaali kartaa barnaamij sida Crowdfire. Giáo dục
Evan Carmichael, oo ah qoraa iyo ganacsade, waxay kugula Talinayaan inay bixiyaan qiimo dheeraad ah waa habka loo helo taageerayaal badan oo Twitter ah. Wuxuu yidhi, "Jooji kaliya farriimaha farriimaha soo gudbinta. Daryeel badan. Sida sáp kale oo cải xoăn, inta badan ee aad gelisay, aad u badan tahay inaad baxayso. "
Abuuri tweets trong aad rabto trong aad muujiso carruurtaada waaweyn hal maalin. Ku dhaji kaliya mawduuca aad runtii ku faani karto. Miyaad abuureysaa heerkaas? Taasi waa sababta aadan haysan taageerayaasha Twitter aad rabto. Tiradaada tiri waa xaqiiqda aad u qalantaa inaad leedahay. Tallaabooyinkaagu waxay kuu keeneen dhibicdan.
Kordhin xisaabtaada Twitter boggaaga internetka, oo ay ku jiraan qaybta "Raac chúng tôi" qaybta calaamadda ah.
Websaydhku wuxuu leeyahay in ka badan taageerayaasha ’75k Twitter’ – Waxaan hubaa ở Scocco ay gelisay shaqo badan.
Wadaagista waxyaabaha dhageystayaashayadu xiiseynayaan inay helaan taageerayaal badan oo Twitter ah ayaa ka fudud in la sheego. Sida uu qabo Harris Scahcter, Hồi Marka ugu horeysa, waxaad u baahan tahay inaad caddeyso waxa ay tahay waxaad tahay qof kasta sababta uu qof kuu raõo.
– Tan waxaad ku samaynaysaa noolahaaga – ha ku khasaarin inaad noqoto mid guud ama aan kala sooc lahayn. Markay ku saabsantahay nuxurkaaga, tayada sifiican ugu muuji khadkaaga tusaha si aad u kaydiso ballan qaadkii aad ku sameysay noolahaaga. Kaliya ha wadaagin fikradahaaga (ilaa aad horay caan u ahayd) ama waxa aad adigu iska leedahay. Giáo dục
Waxaad adeegsan kartaa adeegyo sida Google Alerts, Talkwalker, subreddits-ka la xiriira, iyo akhristaha RSS ee kuu gaar ah si aad u hesho waxyaabo cusub oo xiisa leh oo aad ku soo Waxaad kuheleysaa kuwa raacsan adoo muujinaya inaad Firfircoontahay oo aad bixiso qiimo.
"Ugu dambeyntii, noqo shaqsi. Jawaab u dir tweets, la hadal Dadka, r tweet, oo wadaagaan j Cụmlka, "ayuu raaciyey.
Trò chơi Ruben
Ann Tran, qoraaga Huffington Post iyo la Taliyaha arrimaha bulshada, wuxuu leeyahay sáp gaar ah Waxaan jeclaan lahaa inaan kula wadaagno:
Halkan waxaa ku qoran Tran post Entusinessur.com. Inkastoo boostada aysan aheyn kii ugu dambeeyey, Talooyinka Weli wali waa ay khuseeyaan.